DHAQDHAQAAQA HAL QARAN OO BERI QORSHEYNAYA QABASHADA XAFLADI UGU BALAARNEYD
admin Sept. 18, 2016, 10:09 a.m. 401
Dhaqdhaqaaqa Hal Qaran oo horay ugu soo jeediyay Mudane Jabriil Ibraahim Cabdulle inuu isu soo sharaxo xilka Madaxweynenimo ee dalka, maadaama uu yahay qofka kaliya ay ku kalsoon yihiin inuu noqdo midki u horseedi lahaa dalka horumar iyo cadaalad laguna wada qanacsan yahay.
Abaabul xoog leh oo aan weli hore loo arag oo la'isugu diyaarinayo Xaflada ku dhawaaqida musharax madaxweynenimo ee sanadda 2016 ayaa si xowli ah uga socta dalka gudihiisai iyo dibadiisa. Xafladdan ayaa maalinta Isniinta ah ee 19/09/2016 lagu qaban doonaa Hoteelka City Palace oo ku yaalla magaalada Muqdisho.
Ilaa Boqol Kun oo kamida taageerayaasha iyo xubnaha Hal Qaran ayaa ku howlanaa diyaarinta barnaamijkan, iyadoo siyaasiyiinta, odoyaasha dhaqanka, culumada, ganacsatada, dhalin yarada iyo haweenka si gooni gooni ah ay uga dalbadeen Mudane Jabriil Ibraahim isu soo sharxidda xilka Madaxweynenimo, ayagoo si cad u muujiyay in uu yahay shakhsiga kaliya ee bad baadin kara qaranimada Soomaaliya.
Mid kamida 135-ta xubnood ee duubabka dhaqanka Soomaaliya ayaa cod dheer ku sheegay in qofka kaliya ee Soomaali oo dhan ay ku aamini karto xilka madaxweynaha uu yahay Mudane Jabriil Ibraahim Cabdulle.
Dhinaca kale Hobolada qaranka ee Waaberi, Onkod, Horseed , Heegan iyo fanaaniin waaweyn oo caan ah ayaa heeso dareenka shacabka Soomaaliyeed kiciyay u qaaday Mudane Jabriil ayagoo muujiyay taageero aan hore loo arag halka shacabka Soomaaliyeed ee adeegsada baraha bulshada ayaa dhankooda muujiyeen taageero aad u xoogan.